Ny tsokan'ny taolana dia manatanteraka ny asan'ny vatan'ny olona ao amin'ny vatan'ny olona. Raha tratra noho ny antony maromaro ny sela, dia mahazo ny kanserany izy ireo ary manomboka ny fizotran'ny fizotrany. Rehefa mandeha ny fotoana, dia manasaraka ny sela malemy ny sela malemy, ary mitombo ny homamiadana. Na dia eo aza ny fahasarotan'ny aretina dia azo tsaboina tsara izy, indrindra fa amin'ny fahazazany. Ny olana lehibe dia hoe sarotra ny mamantatra ny leokemia amin'ny fotoana ara-potoana - ny soritr'aretina sy ny soritr'aretina dia tsy miseho hatramin'ny ela. Noho izany, matetika no hita amin'ny aretina ny aretina ary mitarika ho amin'ny vokatra mahafaty.
Inona no atao hoe leukemia rà - ny soritr'aretina sy ny toetrany
Raha ny marina, ny aretina voavolavola dia vondron'olona marary marobe. Noho ny tsy fahampian'ny leokemia dia misy sela maromaro (clones), dia miparitaka haingana ao amin'ny vatana izy io ary misy fiantraikany amin'ny taova anatiny. Noho izany, ny soritr'aretin'ny aretina matetika dia tsy mahasosotra sy tena be mpanaraka:
Marary Andoha Lava;
fanitsakitsahana ny asan'ny tohotra;
matetika aretina mifindra amin'ny aretina;
fatigue , fatigue.
Ankoatr'izany, ny homamiadan'ny ra dia miharo sy mitaintaina amin'ny fananganana fanampiny amin'ny sokajy araka ny karazana sela miova. Miankina amin'ny endriky ny leokemia koa ny mari-pamantarana misy azy.
Aretina maizina - soritr'aretina
Ity karazana aretina ity dia mitombo noho ny fiovan'ny fipoahana - mbola marefo ny selan'ny rà ao amin'ny tsokan'ny taolana.
fanaintainana eo amin'ny taolana;
gripoka, ary ny tazo;
fananganana mangana sy mangana;
toerana eo amin'ny hoditra mena volomparasy na mena;
fampandrosoana ny tadin'ny lymph .
Raha misy lymphoblastika na leokemia miorona - ny soritr'aretina dia ampitomboina amin'ny fitomboan'ny atin'ny kalsioma, ny atiny. Ity karazana lozam-pahaizana ity dia miteraka matetika amin'ny zaza latsaky ny 6 taona, indrindra ny lahy.
Leokemia miteraka - soritr'aretina
Ny endriky ny voan'ny homamiadan'ny ra dia miaraka amin'ny fiovan'ny sela na eo amin'ny dingan'ny matroka, na efa voavolavola tanteraka. Ny karazana aretina mitaiza dia miavaka amin'ny fitomboan'ny fifindran'ny leokocytes ao amin'ny tsoka sy ra. Ity karazana leokemia ity dia miadana, hatramin'ny 20 taona, noho izany dia mijaly, amin'ny ampahany betsaka, ireo zokiolona.
Tsy dia misy fanehoana na oviana na oviana ny aretim-pandrenesam-pahasalamana mitranga, indraindray dia mety hisy fahalemena sy fihenan-tsakafo kely amin'ny tendany. Voamarika tsy fahita firy ny famantarana toy izany, noho izany dia mitohy ny aretina.
Ny dingana farany amin'ny leokemia dia aseho amin'ny endriky ny tsy fahampian-tsakafo, ny faharetan'ny vatany mihamitombo, ny fahalemena mafy, ny hatsembohana. Mety misy ny fahatsapana fihenjanana ao amin'ny faritry ny aty (ankavanana), fihenam-bidy mavesatra sy fahaverezan'ny faniriana.
Tsara ny manamarika fa ny leokemia monocytique dia tsy mampiseho ny soritr'aretina mifandray amin'ny foto-pahaizana. Ny marika famantarana an'io sokajin'io aretina io dia ny tsy fahampian-tsakafo, izay voamarina amin'ny alalan'ny fandinihana ny ra, matetika indraindray mandritra ny fanadihadiana ara-pitsaboana.
Ny iray amin'ireo karazana mahazatra indrindra amin'ny endriky ny homamiadan'ny taolam-paty dia ny leukemia voan'ny volo - mihalalina ny soritr'aretina, noho izany ny aretina voafaritra Misy fiantraikany, indrindra fa ny lahy eo amin'ny planeta amin'ny faha-50 taonany. Ny mampiavaka ny karazana sela sela dia fihenam-bidy an-tsakafo (spleen (splenomegaly). Anisan'ireo famantarana hafa ny fihenan'ny alahelo, ny hatsembohana amin'ny alina.
Zava-dehibe ny mitadidy fa ny leukemia maitso dia tsy midina amin'ny endrika mitaiza, ary ny farany dia tsy manam-potoana mihamitombo. Noho izany, tsy azo atao ny miverina ny leokemia, ary ny soritr'aretina, izay mitombo amin'ny farany, dia famantarana momba ny fivoaran'ny aretina sy ny fanoloana ny ankamaroan'ny sela salama miaraka amin'ny klone miverimberina.
Toerana mena eny amin'ny palma
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny immunité - fanafody sy ny fitsaboana amin'ny vahoaka
Manakana ny homamiadana - ny fahafaha-mazavoana aloha
Ny tsindry diastolika ambany - ny antony
Fanadiovana ny ra amin'ny laser
Dysentery - soritr'aretina amin'ny olon-dehibe
Phenibut - famantarana ny fampiasana
Mofomamy anaty tavoahangy - recipe
Tantric massage - teknika sy solika ho an'ny masira tantric
Ny divay avy amoron-dranomasina no fomba tsara indrindra hanaovana alikaola
Nahoana no miseho ny WenWiki?
Phosphorus amin'ny vatan'olombelona
Loharano ho an'ny trano
Seleri - toetra mahasoa sy fanoherana
Kintana iray ambany: 20 sarin'angonin'ny olo-malaza mamo
Aquarium amin'ny tanany manokana
Ahoana no hialana amin'ny olona, ​​amin'ny fahafantarana ny nomeraon-telefaoniny?
Ny fomba amam-panao ao anaty akanjo, na ny endriky ny sipa mpifankatia
Fitiavana manga amin'ny akanjo 2013
Fotothermolysie fitaka - tarehy vaovao tsy misy fandidiana
Lindsay Lohan dia namoy ny ainy niaraka tamin'ny mpamily iray
Sary 30 manaporofo fa capybar no biby malaza indrindra eran-tany!